Firefox nandresy ny Adin'ny Browser | Martech Zone
Ny fijerena ny fizarana tsena farany ho an'ny mpizaha dia manome fahitana kely momba izay mandresy sy resy amin'ny ady. Manohy manangana hery i Firefox, mandady ambony i Safari, ary very toerana i Internet Explorer. Te-hanome hevitra momba ireo telo ireo aho miaraka amin'ireo 'teôria' ahy momba izay mitranga.
Taorian'ny nandravana ny Netscape Navigator, IE dia nanjary fari-bolamenan'ny harato. Tsotra, mandeha ary nohafatra mialoha tamin'ny entana rehetra Microsoft Products. Ary koa, i ActiveX dia nanana teboka fohy, mitaky ny ankamaroan'ny olona hampiasa IE. Maninona no mampiasa mpizaha tany maro rehefa manohana ny fenitra rehetra samihafa amin'ny Internet ny iray amin'izy ireo? Izaho manokana dia mpampiasa IE tamin'ny alàlan'ny andiany 6.
Miaraka amin'ny Internet Explorer 7, ny tontolon'ny famolavolana tranonkala dia tena nitazona fofonaina hijerena browser izay azon'izy ireo noforonina mba hihetsika mifanaraka amin'ny haitao farany an'ny Cascading Style Sheets. Mampalahelo fa diso fanantenana ny IE 7. Tamin'ny fandinihana ny IE Blog dia tena tsy tao amin'ny radara akory izany mandra-pahatongan'ny beta ny mpitety tranonkala ary ny kiakiakan'ny alahelo dia avy amin'ny indostrian'ny famolavolana tranonkala. Ny fivoarana farany dia nanitsy ny sasany tamin'ny olana… saingy tsy ampy hahasambatra ny endrika. Aza adino - maro amin'ny tontolon'ny famolavolana no miasa amin'ny Mac… tsy manana Internet Explorer. Saingy, indrisy ho azy ireo, ny mpanjifany dia mampiasa Internet Explorer.
Saingy indrisy, tamin'ny Internet Explorer 7, Microsoft dia nanova tanteraka ny fifandraisan'ny mpampiasa sy ny mpanjifa. Ho an'ny teknôlôjia toa ahy, ny sasany tamin'ireo fanovana dia karazana mangatsiatsiaka. Saingy ho an'ny mpampiasa atypical… ny tsy fahafahany mivezivezy an-tampon'ny efijery dia sady tsy nahagaga no nampikorontana. Nanomboka nijery izay zavatra hafa misy izy ireo. Firefox.
Pikantsary avy amin'ny http://marketshare.hitslink.com/
Ny fakana tahaka ny fiasan'ny navigateur ankapobeny izay miverina amin'ny Navigator, Firefox dia lasa vahaolana mifandimby maivana amin'ny Internet Explorer. Ho an'ireo Microsoft anarchists mpikomy, nanjary liana ny Firefox ary nanomboka nindrana ny tsena.
Fitaovana fanampiny toy ny plugins faran'izay tsara ho fampidirina amin'ireo teknolojia hafa dia tombony lehibe ho an'ny Firefox. Manohy manintona ny mpamorona sy ny mpamorona tranonkala izy ireo… satria matanjaka ny debugging, ny Cascading Style Sheet ary ny plug-in an'ny antoko fahatelo izay manamora ny fampandrosoana sy ny fampidirana azy ny Firefox.
Miova koa ny tsena. Maty daholo i ActiveX ary mirongatra ny Ajax, mampindrana ny tenany amin'ny mpitety tranonkala toa an'i Firefox. Tsy misy antony ara-teknika hampiasana Internet Explorer amin'izao andro rehetra izao. Raha mahavita azy ny IE, dia mahavita azy tsara kokoa ny Firefox. Matetika ny fanavaozana ny Windows dia mila fitetezana ilay browser, fa izao kosa dia afaka entina sy apetraka tsy misy azy io izy ireo.
Tsy nafoin'i Firefox ny fampiasana azy sy ny fisehosehoana toy ny nataon'i Microsoft tamin'ny IE 7, ka manamora ny fifindran'ny mpampiasa ho Firefox avy any IE 6 amin'ny fomba tsotra sy mora. Kanto, haingam-pandeha ary seamless.
Miaraka amin'ny tsindry farany nataon'i Mac teo amin'ny tsenan'ny PC an-trano… tsy PC intsony ho an'ny Oniversite, vehivavy sy ankizy intsony. Ny Mac vaovao dia mihazakazaka OSX, Windows XP (miaraka amin'ny Parallels) ary afaka mihazakazaka ny navigateur rehetra eto ambonin'ny planeta aho mba hamolavolana sy hivoatra. Miaraka amin'ny preloaded Safari, tsy isalasalana fa mahazo fizarana izy satria mahazo tombony ny Macs. Ny vinavinako dia ny Safari fa ho resin'i Firefox.
Microsoft dia tokony hahatsapa ho tandindomin-doza tokoa - saingy izy ireo ihany no diso. Nofoanan'izy ireo ny filan'ny mpitety azy manokana, ny mpampiasa misolo toerana, ny mpamorona voasarika, ny mpamorona voaroaka, ary avelan'izy ireo hafa izao hitondra azy ireo amin'ny sehatra hafa (finday) hafa.
Manimba tena fotsiny ny Internet Explorer. Tsy azoko antoka hoe aiza no misy ny fifantohan'ny mpanjifany.
Rehefa avy misintona sy mametraka Firefox ianao dia mandehana any amin'ny Add-ons fizarana ary ampidino amin'ny atin'ny fonao. Ho an'izay manao an'io, tiako ny hampiasanao ilay browser mandritra ny roa herinandro ary hiverina any amin'ny tranokalako aho ary hampahafantatra ahy ny hevitrao.
Izaho dia bandy Microsoft nandritra ny folo taona mahery izao, ka tsy izaho basher. Na izany aza dia nahatsapa ho voatery niditra an-tsehatra aho ary nifanakalo hevitra momba ny korontana ara-paikadin'ny ekipa IE izay tena tafiditra tao.
Tags: ady amin'ny browsernavigateurFirefoxiempikaroka Internet 7Microsoftnavigator netscape
Blog mitombo haingana indrindra eto amin'ny planeta?
Dec 8, 2006 ao amin'ny 11: PM PM
Manaiky aho fa tsy misy antony hampiasana ny IE intsony, indrisy anefa fa mbola feno olona vaovao internet izay tsy mahalala tsara an'izao tontolo izao. Manantena aho fa hiova izany amin'ny farany.
Dec 9, 2006 amin'ny 3: 54 AM
Mpampiasa Firefox sambatra aho nandritra ny taona maro izao. Mahatsiaro ho tia azy aho noho ny fanitarana tsy tambo isaina, ary ny fitomboan'ny fiarovana amin'ny Internet Explorer.
Rehefa nahazo ny MacBook Pro vaovao nataoko tamin'ny fiandohan'ity taona ity aho dia nanandrana ny Safari nandritra ny herinandro vitsivitsy, nefa niafara tamin'ny fiverenako tany Firefox. Ny safidy ho an'ny fanamboarana dia saika tsy misy fetra. Tao anatin'izay herintaona lasa izay dia novako soa aman-tsara ho an'ny Firefox ny fianakaviako manontolo (sy ny ankamaroan'ny namako).
Dec 9, 2006 amin'ny 11: 27 AM
Tsy te-hahamenatra ahy i Paul - fa ho hitanao fa nanitsy ny phobias-ko tamin'ny finday aho! Fisamborana tsara avy amin'i Paul izay nahafinaritra ahy nandefa mailaka tamiko! Fantatry ny olona mahalala ahy fa manam-pahaizana amin'ny fibatana anglisy aho. Tena namana tokoa izay hanavotra anao amin'ny mahamenatra ny tenanao!
Paul dia manana bilaogy tsara ao amin'ny:
Dec 17, 2006 amin'ny 1: 17 AM
Manaiky tanteraka aho fa handresy ny IE 7 i Firefox na….
Ny antony hikapohana dia ny Firefox Plugins sy Firefox Add-ons.
Heveriko tamin'ny Jolay 2007, hijoro amin'ny 35% ny IE
Dec 17, 2006 amin'ny 2: 21 AM
Assalamu, Fazal. Mitovy hevitra aminao aho! Efa mivoaka ny Firefox 3 Alpha, i Mozilla dia mamaky làlana tsy azon'ny Microsoft mifaninana.
3 Mey 2007 tamin'ny 6:46 hariva
Nametraka IE7 teo amin'ny computr amin'ny birao aho ary niasa tsara rehefa avy nilalao azy aho, fa rehefa nametraka azy tao amin'ny solosaina findainy aho dia nijanona ny zava-drehetra. Raha tsy hitako fa ny programa (raha tsy misy add-ons) dia tafiditra tao anatin'ireo programa nataoko tamina kojakoja tsy ho azoko tohizina mihitsy.
Manahy aho, manao banky an-tserasera aho ary tsy azoko antoka hoe afaka mampiasa Foxfire aho. Te hanandrana aho fa mila fampahalalana bebe kokoa.
3 Mey 2007 tamin'ny 7:39 hariva
Ny banky an-tserasera maoderina dia manara-dalàna. Ny manahirana dia ny fanohanana ny SSL (Secure Sockets Layer), izany dia fitaovana iray voaroaka mampita ny angon-drakitra misy eo anelanelan'ny tranokalanao sy ireo mpizara amin'ny Internet. Manohana tanteraka an'i SSL i Firefox toy ny ataon'ny IE tsy misy fetra. Ny fomba mazava indrindra ahafantaranao fa mampiasa SSL dia amin'ny adiresy https: // ianao fa tsy http://. Na izany aza, ny IE sy ny Firefox (ary ny Opera sy ny Safari) dia samy manana ny mariky ny fahitana sy ny fizotran'ny fanamarinana fa ny fanamarinana SSL sy ny encryption dia mitombina ary mandeha tsara.
Raha lazaina amin'ny teny hafa - tsy tokony hanana olana ianao. Mazava ho azy fa tsy maharary mihitsy ny manamarina ny pejy “Fanohanana” ny bankinao hahitana raha manohana an'i Firefox izy ireo. Tena ho hitanao fa navigateur mahafinaritra io - haingana be miaraka amin'ny goodies be dia be.
Misaotra nitsidika… ary nanome hevitra!
3 Nov 2007 tamin'ny 5:50 PM
Niampita ny marika fisintonana 400 tapitrisa i Firefox ary antenaina fa handeha lavitra kokoa. Ny fomba hafa dia fomba iray fandrosoana hatrany.
Saingy ny fandresena tamin'ny adin'ny mpitety tranonkala… mbola hatrizay.
3 Nov 2007 tamin'ny 11:24 PM
Nampiasa IE nandritra ny taona maro aho, tohizo ny fampiasana azy ary tsoriko fa tsy mahatohina ahy amin'ny tombotsoan'ny mpampiasa Firefox. Miahiahy aho fa ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy miraharaha izany. Miombon-kevitra aminao aho, na izany aza, ny fanovana ny IE 7 dia somary nisavoritaka ihany.
21 Nov 2007 tamin'ny 8:11 PM
Miombon-kevitra amin'ireo zavatra nataonao momba ny IE7 aho ary amin'ny maha-mpamorona tranonkala ahy, navela zavatra vitsivitsy aho rehefa navoaka ny IE7. Eo am-pananganana tranokala vaovao aho izao ary sendra olana vitsivitsy momba ny div aho fa tsy misy zava-dehibe (hatreto). Nampiasa IE7 farafahakeliny aho fa nanantena hitsambikina goavana avy amin'ny 6.0 ho an'ny fanohanana CSS, sns.
Mpampiasa Firefox nandritra ny taona maro aho ary nanangona mpampiasa vaovao vitsivitsy teny an-dalana. Heveriko fa ny zavatra manintona ahy indrindra, sy mpampiasa FF hafa marobe, dia ny fisian'izany hoe mpamorona tranonkala / mpamatsy olona tena tia azy ary ny fanao no manosika azy. Mieritreritra aho fa hitohy hianjera ny IE ary mieritreritra aho fa mila fahagagana i Microsoft amin'izao fotoana izao. Ny momentum azon'ny Firefox sy ny Safari dia mahazo tsimoramora, dia mihoatra ny IE ary ny tsy fahombiazan'izy ireo hatrany amin'ny famokarana mpizahatany manara-penitra amin'ny Internet, dia tsy manampy azy ireo kely akory.
Izahay mpamorona tranonkala dia afaka manome azy ireo vintana betsaka 😛
22 Nov 2007 amin'ny 7:44 maraina
Mamitaka ireo fanehoan-kevitra ireo. Raha ny statistika farany hitako dia nihena ny anjaran'ny IE tamin'ny 85.88% ny anjarany manerantany ho an'ny Q4 2005 ka hatramin'ny 78.5% ho an'ny Q3 2007. Izany dia nilatsaka 7.3% tao anatin'ny roa taona.
Mandritra izany fotoana izany, ny Firefox dia nanala zoom 9% ka hatramin'ny 14.6% tao anatin'ny fe-potoana mitovy. Izany dia fiakarana 5.6% ao anatin'ny roa taona.
Safari dia lasa 3.1% ka hatramin'ny 4.77% - fiakarana izay zara raha tokony horesahina.
Eny Firefox dia mahazo eo amin'ny IE, saingy ny IE dia toa manana 5x mahery amin'ireo mpampiasa.
Ireo statistika ireo dia avy amin'ny Wikipedia "Usage_share_of_web_browsers" ary mazava ho azy fa mety hitongilana amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa.
Toa tsy miraharaha izay eritreretin'ny mpamorona tranonkala ny ankamaroan'ny tany. Heveriko fa tokony hamolavola ny besinimaro isika fa tsy hanahy momba ny safidintsika manokana.
22 Nov 2007 amin'ny 8:48 maraina
Misaotra Rick! Azontsika atao ve ny manontany hoe aiza ny loharanom-pahalalana momba ny statistika?
Miombon-kevitra aminao aho, saingy misy ny fampitandremana mba tsy hiraharaha izay eritreretin'ny mpamorona tranonkala… ary izany dia mbola hitohy ho tetikady lafo vidy ny famolavolana tranonkala rehefa tsy maintsy mamolavola ivelan'ny fenitra ianao mba hampitoniana ny anjaran'ny tsena 85.88%!
22 Nov 2007 tamin'ny 2:25 PM
Laharam-pahamehana hatrany ny famolavolana ny besinimaro fa ny tsy fanarahan'ny Microsoft ny hafa rehetra dia mahatonga ny asantsika ho sarotra kokoa. Indraindray aho dia mila manoratra takelaka fanamoriana samy hafa tanteraka ho an'ny IE irery ary mandany fotoana izany. Tsy midika inona izany amin'ny mpampiasa antonony. Mahasosotra fotsiny raha ny browser izay mitarika ny fonosana no iray tsy manaraka fari-pitsipika faran'izay kely indrindra.
22 Nov 2007 tamin'ny 3:44 PM
Tsy manana adihevitra momba ny ahiahinao amin'ny fomba fijerin'ny mpamorona aho, na dia tsy azoko antoka hoe maninona ianao no manahy fa afaka mitaky vola bebe kokoa amin'ny olona amin'ny serivisinao. Moa ve ny olona tsy vonona ny handoa izany? Mazava ho azy fa olana ara-teknika tsy maintsy resena ireo.
Izaho dia mandray olana fotsiny amin'ilay sosokevitra fa misy hetsika goavana miala an'i IE. Ny statistika (raha ny azoko lazaina) dia tsy manohana an'io fitakiana io, na eo aza ny mpamorona sy ny SEO rehetra izay milaza fa tsy misy ary mampiroborobo ny FF tsy misy farany. Na tokony hampiroborobo azy ireo dia fanontaniana iray hafa, ary mety ho marina ny anao momba izany.
Araka ny efa noresahiko tao anaty ny hevitro, Wikipedia no loharanom-pahalalako - tsy ny loharanom-baovao mahavariana indrindra, fa ny tarehimarika dia toa feno…
23 Nov 2007 tamin'ny 5:42 PM
Mety diso ny anao amin'ireto olana roa ireto, Rick. Miady hevitra aho fa ny IE dia manohy manana ampahany betsaka amin'ny tsena satria ao anatin'ny rafitry ny Operating System izany. Raha alaina ho fisintomana sy safidy tsara izany dia mino tokoa aho fa hanipaka ny vodin'izy ireo ny FF.
Dec 21, 2007 amin'ny 6: 51 AM
Izaho dia programmer sy developer web taloha. Tamin'ny 2003 dia sendra lozam-pifamoivoizana iray aho ary nidona tamin'ny lohako. Sarotra loatra amiko izao ny kaody fanoratana, koa ankehitriny dia olon-tsotra aho..lol
Na izany na tsy izany, nampiasa Linux aho hatramin'ny taona 1996 (tsarovy Caldera-rehefa tokony avelanao hisintona ny tenany mandritra ny 2 andro..havalo). Tsy dia tsara ho an'izany ny mpizaha tranonkala talohan'ny Firefox. Rehefa nivoaka ny Firefox dia zavatra lehibe indrindra ho an'ny mpampiasa Linux (Thunderbird koa). Koa satria nampiasain'ny Microcrap mpampiasa Linux foana izy ireo, dia nitifitra ny tongony izy ireo. Tadidiko fa lasa Firefox / Thunderbird no lasa Internet suite ambony indrindra ho an'ny Linux. Tsy goavana izy io, ary azonao atao ny mametraka izay fanitarana tianao (adblockl!). Mazava na mavesatra toy ny anaovanao azy io. Tsy misy faritra tsy ilaina mihitsy. Mangatsiatsiaka sy kely ireo takelaka.
Windows xp no ampiasaiko izao, satria ny 'hafa' eto dia indrisy fa nanao ny fividianana an'io pc io, ka 'azon'izy ireo' ampiasaina (adala). Izay no antony nametrahako avy hatrany ny firefox / thunderbird. Rehefa nampiasa Windows indray aho dia HATED Outlook Express, ary mbola tadiaviko ihany ny hiverenan'ny Firefox, miaraka amin'ny extensions (natahoko ny rakitra config. Sy ny bookmarks avy amin'ny Linux, ary nafarana tao amin'ny Winxp!).
Vao tsy ela akory izay, ny PC-ko dia natomboka indray alina, ary nanana ity boaty fatotra ALIEN ity misy tabilao LEO lehibe tsy ho afaka aho. Ireo bara fivarotana friggin dia mandray 1/5 amin'ny efijery voaozona! HALAKO! Ny olon-drehetra eto koa dia nankahala azy. Aiza ny bokotra STOP? Tsy misy te hanana toerana be loatra ny mpitety tranonkala! Takelaka be dia be, na dia pejy 1 fotsiny aza !!
Ahoana ny amin'ny pejin-tranonkala? Tsy hitanao akory io satria BROWSER ihany no hitanao! Manelingelina be ilay izy ka tsy tantiko. Mazava ho azy fa TSY MISY toerana hitarainana koa i Microsoft. Inona ny korontam-bato tsy misy korontana. Ny vahaolana amin'ny efijery dia napetraka tao amin'ny 1152 × 864 ary tsy azoko an-tsaina hoe ahoana ny endriny amin'ny 800 × 6000! Afaka mahita ilay pejy ve aho?
Ka ny ankihibe 2 ho an'ny IE7! Samy mankahala izany ny olona, ​​ary io no fahafatesan'i IE. Mampihomehy, nanana navigateur ok izy ireo, saingy tamin'ny fandikana ny Firefox dia manana fatiantoka izy ireo izao. Ny tiako holazaina .. inona daholo ireo banga eo amin'ny biraom-pitaovana, ary aiza ny bokotra sisa ??
Misaotra an'i Microsoft, nanao ny tenanao ianao tamin'ny farany! Mandany fotoana be dia be aho izao manazava amin'ireo hafa izay miantso sy manontany hoe maninona no mahatsiravina sy sarotra ny browser-n'izy ireo, ary ampio izy ireo hanala ny IE7! Tsy misy olona maniry an'io!
May 28, 2008 ao amin'ny 12: 30 PM
Heveriko fa marina ny anao Atoa Blog lehilahy, efa herintaona mahery izao no nampiasako ny Firefox tamin'ny solosainako ary tsy niherika intsony. Izay mahalala na inona na inona momba ny rindrambaiko solosaina dia afaka milaza aminao fa ny Firefox no navigateur ambony ambany. Tsy mbola nanandrana ny rindrambaiko Thunderbird aho satria ny Outlook 2007 ao amin'ny Office Enterprise dia tena tsara ary mety amiko. Maninona no ovaina io raha tsy vaky. IE 6-7 dia tapaka na izany aza, isaky ny miasa amin'ny namana, fianakaviana, sakaiza amin'ny Internet aho, na olona maniry fanampiana fotsiny dia apetrako foana na holazaiko amin'izy ireo mba hahazoako Firefox. Tsy misy atidoha ao amin'ny bokiko.
Te hahafantatra fotsiny aho hoe maninona no noheverin'i Microsoft fa mamoaka navigateur ambony izy ireo, tsy mahay an'izao tontolo izao manodidina azy ve izy ireo? Moa ve noho izy ireo mieritreritra fa mahafinaritra tokoa ny rindrambaiko misy azy ka hampiasa azy fotsiny ny olona? Sa noho i Microsoft nanangona vola an'arivony tapitrisa isan'andro ary nilaza izy ireo fa “hadinoy ny mpanjifa fa tsy miraharaha izay eritreretin'izy ireo izahay” ka nanery fotsiny ilay mpitety tranonkala tsy misy dikany sy tsy mandray andraikitra eny an-tsena. Adala! Tsy toy ny manana solosaina tsy misy dikany aho, IE dia mandeha toa ny banga amin'ny rafitra rehetra. Tokony ho ao anaty kaody lozisialy na zavatra hafa izy io.
Fialamboly fotsiny dia napetrako androany mba hahitako raha efa nihatsara tamin'ny fahagagana (tsia) mbola moka ihany. Avy eo hoy aho anakampo hoe "Maninona, maninona no mandeha toy izany" ka dia nitady aho (Maninona no miadana miadana ny Internet Explorer) ary mazava ho azy fa ny fikarohana ny pejy fandraisana Google no nampiasaiko tao amin'ny Firefox. Niafara teto aho taorian'ny fanarahana rohy iray avy amin'ny tranokala hafa miaraka amina lahatsoratra toa izany. Naharaka ny lalana aho ka mbola tsy manana ny valinteniko. Mandehana Firefox Go! Kick Bill Gates ao anaty voanjo ho antsika rehetra indray mandeha isaky ny olona tsy tapaka. Hanamarika ny fiverenana iray ho an'ny FF aho, ratsy amin'ny fihinanana fahatsiarovana izany. Eritreritra mora raikitra, famerenana haingana, tsy miadana dia hanamboatra izany.